कान्छो छोराले बिर्सियो है आमा ? - Bibechana Bibechana
कान्छो छोराले बिर्सियो है आमा ?
११ बैशाख २०७७ २०:४२ ||
म निकै ढिलो जन्मिएको छोरो । मभन्दा अघिल्लो दाजु नै ११ वर्ष जेठो छ । हामी पाँच भाइ छोरा । त्यसबेला अरुका घरमा चाहिँ छोराको आशमा सन्तान थपिन्थे । हाम्रोमा छोरीको आशमा छोरैछोरा थपिए । अरुलाई छोराको रहर हुन्थ्यो । मेरी आमालाई भने छोरीको रहर थियो ।
लगातार तीन छोरा जन्मिएपछि मणिपुरतिरका एकजना ज्योतिषीलाई बुवाआमाले चिना देखाउनुभयो । ती ज्योतिषी पनि हाम्रै थरका । चिना हेरेपछि मेरी आमातिर फर्किएर तिनले भनेछन्, ‘काकी, अब एउटा भाइ जन्मिन्छ, त्यसपछि बहिनी पक्का ।’ त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०३९ सालमा मेरो काइँलो दाइ जन्मियो । अब पालो थियो छोरीको ।
काइँलो जन्मिएको ९ वर्षपछि आमा साह्रै बिरामी पर्नुभयो । घाँटीभित्र मासु पलायो । केही निल्नै भएन । घाँटी पूरै सुन्नियो । विराटनगरमा आमाको घाँटीको शल्यक्रिया गरियो । आमा कहिलेकाहीँ सुनाउनुहुन्छ, ‘कत्ति दिनसम्म होसै आएनछ मेरो, डाक्टरले माया मारिसकेका थिए अरे ।’ डाक्टर भगवानका रुप हुँदा रहेछन् । उनीहरुले मेरी आमालाई बँचाए । अहिले पनि आमाको घाँटीमा हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ, अगाडिपट्टि आधा नै चिरेर सिलाइएको छ ।
त्यसको दुई वर्षपछि बुवाआमाले छोरीको आशामा मलाई जन्म दिनुभयो । मभन्दा अघिका सबै दाजुहरु इलामको पश्चिम–दक्षिणको खै कुन्नी कुन गाविसमा जन्मिए । म जन्मिँदा मेरो परिवार झापाको शिवगञ्ज बसाइँ सरिसकेको थियो । न्वारनमा आएका पुरोहितले मेरो नाम लीला राखिदिए । भाइलाई ‘लीले’ भनेर बोलाउँछन् भन्दै न्वारनकै दिन जेठो दाइले मेरो नाम लक्ष्मी राखिदिनुभयो । बा–आमाको रहर मेरो नामले चाहिँ पूरा गरेछ । लीला भए पनि, लक्ष्मी भए पनि नाम त छोरीकै थियो नि ।
म जन्मिएको केही महिनापछि ती ज्योतिष फेरि हाम्रो घर आए । बाहिर बरन्डामा बसेर उनी बुवासँग गफिँदै थिए । आमा भित्रबाट मलाई बोकेर निस्किनुभयो । मुसुक्क हाँस्दै उनले सोधे, ‘काकी के छ खबर ?’ मेरी आमाले ती ज्योतिषलाई ‘ला तेरी बहिनी’ भन्दै मलाई उसको काखमा राखिदिनुभएछ । उनी लाजले रातोपिरो भएछन् । आमाले यो किस्सा कहिलेकाहीँ सुनाउनुहुन्थ्यो ।
मैले थाहा पाउँदा तीनजना दाजुहरु लाखापाखा लागिसकेका थिए । काइँलो घरमै थियो । सानोमा आमाले मलाई छोरीजस्तै बनाएर राख्नुहुन्थ्यो । लामो कपाल दुईचुल्ठी पारेर कोरेको । त्यसमा रिबन लगाएको । आँखामा गाजल । निधारमा टीका । हातमा चुरा । ठ्याक्कै छोरीजस्तै । ‘कान्छी छोरी…’ भन्दै आमाले बोलाएको अझै सम्झना छ मलाई । गाउँमा हाम्रो घर एक्लो थियो । खेल्न अरुका घरमा जाने अनुमति थिएन । म असाध्यै सन्तोकी थिएँ सानोमा । त्यसैले पल्लो घरकी खड्केनी बडिआमाले ठूलो स्वरमा ‘सन्तोष’ भनेर बोलाउँथिन् मलाई ।
सधैँ दुई चुल्ठी पारेर बाटिने मेरो कपाल काटिएको दिन पनि अलिअलि याद छ । घरमा सेल रोटी पकाइएको थियो । दुईवटा रोटीको चुरा लगाएको थिएँ मैले एक–एकवटा हातमा । रिजाल भिनाजुले कपाल काटिदिनुभयो । त्यसको केही समयपछि मलाई स्कूल पठाइयो । पहिलो दिन स्कूल गएको पनि याद छ । स्टिलको ठूलो थालमा दाल र मोहीसँग भात खाएको थिएँ । त्यस दिन तरकारी पाकेकै थिएन ।
शिवगञ्ज बजारनेरको बोर्डिङमा दुई वर्ष पढेँ । म त्यो बोर्डिङमा हुँदा आमा कहिलेकाहीँ टिफिन समयमा आउनुहुन्थ्यो । प्रिन्सिपललाई बिदा मागेर बजारको फोटो स्टुडियोसम्म लैजानुहुन्थ्यो । त्यस दिन ठूलोममीको छोरा अंकित दाजुले दिनुभएको कोट लगाएको थिएँ मैले । फोटो खिचिदिने मान्छेले कोटको टाँक लगाउनु भने । कोटको सबै टाँक मैले छिनालिसकेको थिएँ । आमाले पिनसियो लगाइदिनुभयो । आमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘त्यसले क्यामरामा हेर्न लगाउँछ, सीधा त्यता नहेर्नु नि, अलिअलि भुइँतिर हेर्नु, अनिमात्र फोटो राम्रो आउँछ ।’
मेरा सबै दाजुहरुले ‘आमा’ भन्थे । मलाई भने ‘ममी’ भन्न सिकाइएछ । गाउँका अरु दाजुदिदीले पनि आफ्नी आमालाई ‘आमा’ नै भन्थे । ‘ममी’ भन्ने मै मात्र हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई । रहरले कहिलेकाहीँ म पनि ‘आमा’ भनिहेर्थेँ । मैले त्यसरी बोलाउँदा आमा रिसाइदिनुहुन्थ्यो । मैले चाहिँ ‘ममी’ भनेरै बोलाएको मन पथ्र्यो उहाँलाई । मभन्दा ३७ वर्ष जेठी मेरी आमा र म साथीजस्तै थियौँ । बुबाले गाली गरेर आमा रुँदा म पनि आमासँगसँगै रुन्थेँ ।
मैले थाहा पाउँदादेखि नै आमा औषधि खानुहुन्थ्यो । घाँटीको शल्यक्रिया गरेपछि डाक्टरले जीवनभर खानका लागि औषधि दिएका थिए । पूर्णरुपमा निको भएजस्तो लागेपछि एकपटक उहाँले औषधि खान छाडिदिनुभयो । ६ महिनासम्म उहाँलाई केही भएन । दह्री भएर घरको सबै काम गर्नुभयो । त्यसपछि भने आमालाई रोगले साह्रो पा¥यो । दाइहरुले आमालाई धरान, विराटनगर, काठमाडौँ कताकता लगेर उपचार गरे । औषधि किन छाडेको भनेर डाक्टरले झपारेछन् । आमा अझै पनि औषधि नियमित खानुहुन्छ । सानो छँदा एकदिन मैले पनि लुकेर एउटा गोली खाइदिएको छु ।
जहिल्यै सेतो भात खाएको मैले एक दिन दिउँसो पहेँलो रङको भात देखेँ । आमालाई सोधेँ, ‘यो के पकाउनुभएको ?’ दिउँसो खाजाको समय भएकाले उहाँले सरल उत्तर दिनुभएको रहेछ, ‘खाजा पकाएको ।’ मैले त्यसको नाम नै ‘खाजा’ ठानेँ । सधैँ पहेँलो भातलाई ‘खाजा’ भनेँ । मैले खाजा भनेको घरका सबैले मन पराए । मेरो अगाडि उनीहरुले पनि खाजा नै भने ।
अलिक वर्षपछि त्यसको नाम चाम्रे हो भन्ने गाउँबाट थाहा पाएँ । अर्कोपटक घरमा त्यो पाकेको बेला ‘आहा आज चाम्रे !’ भनेँछु । आमा जोड रिसाउनुभयो । ‘खाजा भन्’ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले ‘खाजा भात’ भन्न थालेँ । मैले साँधेको त्यो पिरो गुन्द्रुक र आमाले पकाएको ‘खाजा भात’ कत्ति मिठो हुन्थ्यो ।
आमाको प्रेसर हाइ थियो । टाउको दुखिरहन्थ्यो । हप्तैपिच्छे गणेश डाक्टरकोमा प्रेसर जाँच्न जानुपथ्र्यो । एक पटक टाउको दुख्यो भने आठ÷नौ दिनसम्म सञ्चो हँुदैन थियो । त्यही भएर मैले सानैदेखि घरको काम सिकेँ । ८ वर्षको छँदै ओछ्यान मिलाउन, घर बढार्न, खाना बनाउन थालेको थिएँ । गाउँका मान्छेले भन्थे, ‘हेर.. यो चाहिँ छोरी भएर जन्मिनुपथ्र्यो नि ।’
म ४ कक्षामा पढ्दा जेठो दाजुको बिहे भयो । ६ कक्षामा थिएँ होला, दाइको छोरी जन्मिइ । छोरी हुर्काउन नपाउनुभएकी मेरी आमाले नातिनी हुर्काउनुभयो । ९ र १० कक्षामा हुँदा म राति धेरैबेर पढ्थेँ । आँगनमा दुईकोठाको सानो छुट्टै घर बनाइएको थियो । म त्यहाँ एक्लै सुत्थेँ । हामी घाम नअस्ताइ खाना खान्थ्यौँ । म राति भोकाउँछु भनेर आमा जसरी पनि खाना उभार्नुहुन्थ्यो । ‘बटुकाले छोपेर राखिदिएको छु, मोहीसँग खाएर सुत्नु’ भन्दै आमा सुत्न जानुहुन्थ्यो । म ११ बजेसम्म पढेर त्यो भात खाएर सुत्थेँ ।
एसएलसीपछिको तीन महिना गाउँमा पत्रिका वितरकको काम गरेँ । चोकमा सानो पसल गरेँ । चटपटे बनाएर पनि बेचेँ । रिजल्ट आएपछि साइँलो दाजुले मलाई पढाउन सहर लानुभयो । दाइकै माया र प्रेरणाले म पत्रकारितामा आएँ । कलेजमा भर्ना हुन म सहर गएको दिन आमा विराटनगर जानुभएको थियो । आमा अझै भन्नुहुन्छ, ‘त्यस दिन म घरमा थिएँ भने कान्छो छोरालाई मबाट टाढा जान दिने नै थिइनँ ।’
अहिले सम्झिँदा लाग्छ, आमाको सल्लाहबिना सहर नपसेको भए हुने रहेछ । समयले मलाई सबैबाट धेरै टाढा बनायो । म नजिकैको सहरमा थिएँ र पनि आमाबाट टाढा थिएँ । अहिले सबैभन्दा टाढा आइपुगेको छु । आज आमाको मुख हेर्ने दिन । म सानो हुँदा आमाको मुख हेर्ने दिन बिहान बजार गएर स्याउ र जुलपी ल्याएर खुवाउँथेँ । कत्तिवटा मातातीर्थ औँशी बितिसके, कतिवटा दशैँ र तिहार गइसके । म घर गएको छैन । मेरी आमा मलाई कत्ति सम्झिनुहुन्छ होला ।
मेरी प्यारी आमा,
मेरो कारण तपाईं थुप्रैपटक रुनुपरेको छ । तपाईंलाई थाहा छ ? सानो छँदा एकदिन मैले जानीजानी निहुँ खोजेँ । एक साँझ मैले भनेँ, ‘तपाईं कहिल्यै मलाई सुताउनुहुन्न, जा बुवासँग गएर सुत् भन्नुहुन्छ । डेढ वर्षमै दूध पनि छुटाउनुभो । माया नै गर्नुभएन तपाईले मलाई ।’ मैले यसो भनेपछि तपाईं खुब रुनुभयो । डाको छोडेको थाहा नपाओस् छोराले भनेर गाम्छाले मुख छोप्नुभयो । त्यस रात म साह्रै पछुताएँ । अहिलेसम्म पनि मैले बोलेका ती शब्दले पछुताउँछु । तपाईंले त बिर्सिनुभयो होला है ?
सानैदेखि अरुका घरमा पाहुना जाँदा दूध, घिउ खान घिनाउँथेँ म । खोले पकाउने चुलोमा तपाईंले धेरैबेरसम्म उमालेको भैँसीको दूध, तपाईंले आफैँ तताएर सिसामा राखेको घिउ कत्ति मिठो हुन्थ्यो । घिउ दिने भए मात्र भात खान्छु भनेर कति सताउँथेँ म । यतिका वर्षसम्म त्यो स्वादबाट टाढा छु । दूध तताइसकेर कुराउनी कोर्दा एकाबिहानै मेरो याद आउँछ होला । सबैलाई खाना दिइसकेर अन्तिममा खान बस्ने तपाईं पहिलो गाँसमै मलाई सम्झिनुहुन्छ होला । भात अड्किएर ठूलो बाडुली लाग्दा पानी दिने कान्छो छोरोले बिर्सियो है आमा ? नङ लामा भएका बेला आफैँले काट्न नसक्दा झल्झली मलाई देख्नुहुन्छ होला । कपाल लट्टा परेको दिन काइँयोले दुखाउँदा मैले कपाल कोरिदिएका ती दिन सम्झिनुहुन्छ होला ।
आमा, अब तपाईं ६५ वर्ष पुग्न लाग्नुभएछ । मैले घर छाडेको पनि १० वर्ष हुन लागेछ । यी १० वर्षमा मलाई सम्झिएर कति रुनुभयो होला है ? सानो छँदाको ज्ञानी, भलाद्मी, सन्तोकी कान्छो छोरो ठूलो भएपछि असल हुन सकेन है ? छोडेर साह्रै टाढा गयो नि ? आज तपाईंको मुख हेर्ने दिन । पहिले त नजिक भएर पनि टाढाजस्तै थिएँ । अहिले भने साँच्चै नै टाढा छु । जताततै कोरोनाको त्रास छ । ढोका छुन, केही सामान छुन, अरुको मोबाइल छुन डराउँछु । बाहिर निस्किन डराउँछु । कोरोना नै कोरोना छ विश्वभरि । म त्यसैको बीचमा छु । आशा छ, यो कोरोनाले मलाई केही गर्दैन । यसलाई जितेर म अवश्य फर्किने छु । धेरै–धेरै माया छ आमा । कान्छो छोरो चाँडै घर फर्किनेछ ।
परालले बनाएको मुड्के पिरामा बसाएर मलाई ठूलो ठेकीमा मोही पार्न सिकाउने, नेती र मदानी समात्न सिकाउने तपाईं यो उमेरमा पनि सकिनसकी घरको काम सम्हाल्दैहुनुहुन्छ होला । बाहिरफेर गएर जेसुकै खान सिक्यो होला भनेर पीर नमान्नु । तपाईंले नखानु भनेका कुनै कुरा खान सिकेको छैन मैले । आमा आजलाई यत्ति ।
सुखानीमा रुख काटिएकोमा अर्जुनधारा कांग्रेसको आपत्ति
बिर्तामोड– झापाको अर्जुनधारास्थित सुखानी सहिद स्मृति प्रतिष्ठानभित्र रुख काटिएकोप्रति नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा नगर समितिले आपत्ति
बिर्तामोड नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वागत
झापा– बिर्तामोड नगरपालिकाले नब आगन्तुक प्रमुुुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दाहाललाई स्वागत गरेको छ ।
बिर्तामोड– संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन बिर्तामोडले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु सडकमा माग्ने अवस्थामा पुगेको
गिरीलाई समाजसेवा रत्न प्रदान गर्ने निर्णय
बिर्तामोड– सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा झापाका सामाजिक अभियन्ता महेन्द्रकुमार गिरीलाई समाजसेवा रत्न प्रदान गरेको
नेपालमा एकैदिन थपिए दुई हजार भन्दाबढी कोरोना संक्रमित
बिर्तामोड– नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र हुँदै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै
युवतीको बार्गेनिङ लफडाबाट मुक्त भए मुख्यमन्त्री राई
झापा–प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको र लिभिङ टुगेदरमा
सुरुङ्गामा कोरोना परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना
सुरुङ्गा– झापाको कनकाई नगरपालिकामा काेराेना भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । एकका
माग पूरा नभएसम्म झापामा विद्यालय खोल्न नदिने निर्णय
भद्रपुर–संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु भद्रपुर नगर समितिको बैठकले शिक्षक कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएसम्म
बिर्ताबजारको दुर्गा मन्दिर नहटाउन पुरातत्व विभागको निर्देशन
बिर्तामोड– बिर्तामोड–चन्द्रगढी सडकखण्ड निर्माण थालिएसँगै चर्चामा रहेको बिर्ताबजारस्थित दुर्गा मन्दिर नहटाउन पुरातत्व विभागले निर्देशन
बिर्तामोडमा चार तलामाथिबाट खसेर बालिकाको मृत्यु
विर्तामोड– मामा घर आएकी एक जना बालिकाको चार तलामाथिबाट खसेर मृत्यु भएको छ । बिर्तामोड–५ की १३
तीनसय जना युवा नेकपामा प्रवेश
झापा– हल्दिबारी गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा युवाहरु नेकपामा प्रवेश गरेका छन । सामाजिक अभियन्ता अबिषेक खतिवडा, राष्ट्रिय कबड्डी
बिर्तामोड– झापाको अर्जुनधारास्थित सुखानी सहिद स्मृति प्रतिष्ठानभित्र रुख काटिएकोप्रति नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा नगर समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ